Qiimaha ay Kooxda Real Madrid u diyaarsatay suuqa kala iibsiga Oo la ogaaday -
[ December 14, 2018 ] Xildhibaan KGS Oo Ku Ggeeriyooday Rabshaddo ka socda Magalada Baydhabo	Wararka
[ December 14, 2018 ] Siyaasiga C/Raxmaan Cabdi Shakuur “Aad ayaa Loo Bah-dilay Shacabka Reer K/Galbeed”	Wararka
[ December 14, 2018 ] Ciidanka Kenya oo xabsiga dhigay Gudoomiyaha degmada Ceelwaaq	Wararka
HomeciyaarahaQiimaha ay Kooxda Real Madrid u diyaarsatay suuqa kala iibsiga Oo la ogaaday
Qiimaha ay Kooxda Real Madrid u diyaarsatay suuqa kala iibsiga Oo la ogaaday
February 18, 2018 F.G ciyaaraha 0
Harry Kane ayaa markale wacdaro dhigay xalay iyadoo kooxdiisa Tottenham Hotspur ay barbardhac la gashay naadiga Juventus, waxaana taasi ay keentay inuu ugu sarre maro qorshaha dukaameysiga kooxda Real Madrid ee xagaaga soo aadan.
Kane oo xalay gool ka dhaliyey kulankii lugtii hore ee wareegga 16ka tartanka UEFA Champions League ciyaartaasoo Tottenham ay kasoo kabsatay laba gool oo looga hormaray, ayaa wuxuu muddo dheer bartilmaameed u ahaa kooxda Los Blancos.
Shabakadda aadka loogu kalsoon yahay xogteeda ee Sports Illustrated ayaana haatan ku warameysa inay Real Madrid suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub ee xagaaga soo aadan ku qarash gareyn doonto 530 milyan oo ginni.
Harry Kane ayaana ugu sarreeya liiska ciyaartoyda ay lacagtaas kusoo iibsan doonto Real Madrid.
24 sanno jirkaan ayaa dhaliyey 101 gool oo horyaalka England Premier League ah 126 kulan oo uu kusoo bilowday. Halka sidoo kale uu 12 gool u dhaliyey xulkiisa England oo uu 23 kulan u ciyaaray.
Real Madrid ayaa sidoo kale raadineysa weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain Neymar JR.
Dhanka kale, shabakadda Sports Illustrated ayaa ku warameysa inay Real Madrid isha ku heyso tababare Mauricio Pochettino kaasoo ay u aragto bedelka tababare Zinedine Zidane.